F1 ဖြုတ်ချင်လို့— MYSTERY ZILLION
F1 ဖြုတ်ချင်လို ့
September 2008 edited January 2009 in Networking
:106:ကျွန်တော်တို ့စက်တစ်လုုံးက ပါ၀ါဖွင့်ပြီးလို ့POST လုပ်ပြီးရင် F1 နှိပ်ပြီး မှ ၀င်းဒိုး boot လုပ်ပြီးတော့် တက်လာတယ်....အဲဒါ လေ...F1 မတောင်းဘဲ ပါ၀ါဖွင့်လိုက်တာနဲ ့၀င်းဒိုး ကို တန်း ပြီးတော့ တက်ချင်တယ်ဗျာ....F1 မနှိပ် ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ MZ အဖွဲ ၀င်တွေ ရော ...သိတဲ့သူ ရှိရင် ပြော ပေး ကြပါနော်.............:6::6::77:
\_:D/အား လုံးအပေါ် ကျေးဇူး တုံ ့ပြန်ချင်ပါတယ်..........\_:D/
ဘာ error message မှ မပြဘူးလားဗျာ... သေချာချင်လို့ပါ...
battery အားကုန်နေရင်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်... လဲကြည့်ပါဦး..
ကူညီချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာပြောဖို့လိုပါတယ်။ သေချာမပြောတဲ့အပေါ်မှာ အခုဟာက စဉ်းစားစရာအများကြီးရှိပါတယ်။ [FONT=arial,sans-serif][SIZE=-1]တစ်ခု နမူနာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး Error လေးတွေ တော့ပြောပါတယ်. သေချာကြည့်ပြီး ပြန်ပြောစေလိုပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကို သေချာသိမှ Trace လိုက်ရတာ လည်း ရှင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
Press F1 to .....ဆိုပြီး စာတန်းလေးပေါ်လားမသိဘူး? ပေါ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒိစာတန်းလေး ဖော်ပြပေးပါလား ခင်ဗျား။
ကျွန်တော် သိတာလေးပြောကြည့်မယ်နော် ...
Windows တတ်လာရင် အချိန်ကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်ပေးပါ ...
မှန်လား ... မှားလားပေါ့ ...
အချိန်က မှားနေရင် .... Battery အားနည်းနေလို့ပါ ... နာရီဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ရနိုင်ပါတယ် ..
၈၀၀ လောက်ပေးရမယ် ထင်တယ် .... လဲလိုက်ပေါ့ ....
အချိန်က မှန်နေတယ် ဆိုရင် ....
Windows စတတ်တတ်ချင်း delete နှိပ်ပြီး CMOS ထဲ၀င်
ပြီးရင် Hard disk, Floppy, CD or DVD drive တွေကို Detect လုပ်တဲ့ နေရာရှိပါတယ် ...
အဲ့မှာ Enter နှိပ်ပြီးတော့ Detect လုပ်ပေးပါ ...
ပြီးရင် CMOS ကနေပြီးတော့ F10 နဲ့ ပြန်ထွက်ပါ ...
CMOS ထဲက ပုံစံတေă
ကျွန်တော် ကျေး ဇူးတင်ကြောင်းပြောမလို့ပါ....ဒါပေမယ့် log in ၀င်မရလို့ ပြောဖို ့ရာ နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ကျ ပါနော်.........
၂၃၂၃ ပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်လိုက်တာ လေ.........အဲဒါ အခု အဆင်ပြေသွားပြီ........ကျေးဇူးအများ ကြီးတင်ပါတယ်....ကိုလား .....မလား.........၂၃၂၃ ခင်ဗျား........:65:
:106:နောက်လည်း မေး အုံးမယ်နော်........................ဖြေပေး ကြပါအုံးနော်.......
ဒီလိုလေး အစချီပြီး ရေးထားတာပါဗျာ ..... :5:
သေချာ မဖတ်မိလို့ဖြစ်ပါလိိမ့်မယ် ....
မန ္တလေးသူလဲ ဟုတ်ပါဘူး .... :68:
ဟုတ်တယ်နော်.........sorry နော်.....ကို၂၃၂၃ ရေ ကျွန်တော် သေချာ...သတိမထားမိလိုက်ဘူးနော်....:39:
ပါ၀ါဖွင့်ဖွင့်ချင််း POST လုပ်တဲ့အချိန်ပြီးလို ့F1 နိုပ်မှ Windows တက်ဖို့ Loading ဖြစ်တယ်ဆိုတာက
Boot Sequent မှာ Floppy ကို ပထမဦးစားပေးထားလို့ပါ
HDD ကို ပထမဦးစားပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ
ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ အကြောင််းအရင်းကို သိစေချင်လို့ ဒီပိုစ့်ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ
ကျနော်အယူအဆ မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း ပြင်ဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာ
F1 နောက်မှာဘာရေးထားလဲဆိုတာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာပါခင်ဗျ။ များသောအားဖြင့် cmos ဓါတ်ခဲကြောင့်ပါ။
boot sequent က floppy ကို first ပေးထားပေမယ့် ဘာ floppy မှထည့်မထားရင် second boot မှာ HDD ထားရင် HDD ကနေ boot တက်လာမှာပါ။
boot sequent က floppy ကို first ပေးထားပြီး မဟုတ်တဲ့ floppy ထည့်ထားမိရင်လည်းပြသနာရှာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။